Xiaomi CC9 smartphone: kuziviswa kwetambo idzva | TeraNews.net
Xiaomi CC9 smartphone: kuziviswa kwetambo idzva
Munyori Tera nhau Yakabudiswa pa 02.07.2019
Iyo yekuChina hofori yatora chinzvimbo chakasimba mumusika wepasi rose wekugadzira nhare dzemhando yepamusoro uye dzinodhura. Uye zvino yave nguva yekuenda kunzvimbo itsva. Xiaomi CC9 smartphone, kana kuti kwete mutsara wese wemidziyo wakagadzirira kuhwina mwoyo yevashandisi.
Mutsara mutsva wechigadziri weChinese unosanganisira mhando: CC9, CC9e uye CC9 Meitu Edition. Zvese zvishandiso zvinovakirwa paMi ​​9, kana kuti zviri nani, ishanduro yakakwana yedzidziso. Nemusiyano mumwe chete - panzvimbo yeiyo ine simba Qualcomm Snapdragon 855 processor, chigadzirwa chitsva chakawana Snapdragon 710.
Xiaomi CC9 smartphone: zvakanakira
MaChina vanhu vanofungidzira. Siaomi anoziva nzira yekuchengetedza uye kwete kurasikirwa nemutengi. CC9 ine yakafanana Mi9 AmoLED 6,39 inch FullHD inoratidzira + skrini ine chigunwe chakadhinda scanner. 600 skrini inopenya cd / m2.
Vashandisi vanoda mhando selfie - hapana dambudziko. Kamera huru ndeye Sony IMX586 ine resolution ye48 MP, uye kamera yekumberi pa32 MP ine aperture yeF / 1,6. NFC adapta, infrared emitter, Hi-Res HD ruzha - yakajairwa seyazvino smartphones.
Asi nekuzvitonga, iyo Xiaomi CC9 smartphone yakatokura kupfuura mureza Mi 9. Iyo inogadzira yakaisa bhatiri ine mukana we4030 mAh. Tichifunga kuti pane "isina simba" Snapdragon 710 processor, iyo nyowani inoratidza kushanda kwenguva refu pachibharo chimwe chete.
Xiaomi anocherekedza kuti iyo smartphone ichaenda kunotengeswa mune matatu mavara. "Zvinotyisa zvezuva riri muchando" - senge chena, mune yakasviba shanduko yakasviba, uye mune yebhuruu kesi ine masaini akatambanuka. Iye mukuru wekambani, Lei Zun, akazivisawo mitengo yemahara. Mari shoma yeiyo 6 / 64 shanduro ndeye 260 US madhora. Ane smartphone ine 6 GB ye RAM uye 128 flash - 290 $. Mitengo ndeyemusika weChinese. Unogona kutenga foni pano.
Sei uchida magnetic sensor mu smartphone
Xiaomi POCO X3 GT smartphone ye $ 299
Nokia XR20 ine IP68 dziviriro - pakupedzisira yakamirira
Google Pixel 6 uye Pixel 6 Pro munzira (Kuwa 2021)